Roséစပျစ်ရည် gummy စာရွက် + သင်ခန်းစာ - သကြားလုံး
Roséနှင့်အတူလုပ်အရသာဝိုင် gummy စာရွက်
Roséနှင့်အတူလုပ်သောစပျစ်ရည်ကို gummy စာရွက်! ငါတကယ်စာရွက်ကိုရှာဖွေပေမယ့်ကောင်းသောအရသာနှင့်စပျစ်ရည်ကိုတူသောတ ဦး တည်းကိုရှာဖွေနိုင်ဘူး! ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် gummy စာရွက် ! ငါသူတို့ထွက်လှည့်ကိုဘယ်လိုချစ်! သတို့သမီးရေချိုးခန်းအဘို့ပျော်စရာအားရစရာအကြောင်းပြောဆို! သူတို့လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်နှစ်သက်သော Rose တံဆိပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်ဘယ်လိုစပျစ်ရည်ကို gummies လုပ်သလဲ
သင်၏ရွေးချယ်သောဝိုင်၊ သကြားနှင့် citric အက်ဆစ် (ထပ်ထည့်ပါ) Citric အက်ဆစ်သည် frite သကြားလုံးစားခြင်းကဲ့သို့သော“ ကိုက်” သော gummies ကိုပေးသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏ gelatin ၌လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုဖြည်းဖြည်းဖြန်းပြီးဖုကိုကာကွယ်ရန်ဖြည့်စွက်အကြားရောစပ်ပါ
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကိုစက္ကန့် ၃၀ ကြာအောင်ဇွန်းဖြင့်နှိုးဆော်ပါ။ gelatin အရည်ပျော်သွားပြီးအစေ့များကျန်ရှိသည့်တိုင်အောင် ၁၅ စက္ကန့်တိုးပါ။
အအေးမိချိန်တွင်သင်သည် Gummies ကိုမှိုမှဖယ်ထုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်သူတို့နှင့်သန့်ရှင်းစွာထွက်လာသည့်ပြwithနာများရှိပါက၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်သင်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။
သီအိုရီအရ၊ မင်းကဝိုင်လုံးထည်တစ်လုံးလုံးကိုစားလိုက်ရင်မင်းအရက်မူးသွားမှာပါ။ သငျသညျရှိသောကြောင့်သကြားအားလုံးသော်လည်းသင်ဖြစ်ကောင်းပထမ ဦး ဆုံးသင့်ရဲ့အစာအိမ်ဖျားနာချင်ပါတယ်။ ဒီစပျစ်ရည်ကို gummies ကိုအရက်စစ်စစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက် kiddos အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။
Roséစပျစ်ဝိုင်အချိုင့်ကိုပျော်စရာပျော်စရာအဖြစ်မှတ်ယူပါ။ အချိုပွဲဘား, မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အခြားပွဲလမ်းသဘင်များအဘို့ကြီးသော!
ဘယ်ဝိုင်အမျိုးအစားကစပျစ်ရည် gummy နည်းအတွက်အကောင်းဆုံးလဲ?
ဒီတော့ဒါကလှည့်စားတဲ့မေးခွန်းပဲ။ ဒါဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဝိုင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါ New Seasons ကနေRoséကိုသုံးခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြည့်တာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုသုံးပါလို့ငါပြောခဲ့တယ်။ ဝိုင်ကပိုကောင်းလေ၊
ဘယ်ဝိုင်ကိုဝယ်ရမလဲမသိသေးဘူးလား။ အကောင်းဆုံးစာရင်းမှဤစာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ ပန်းရောင် အချို့သောအကြံပြုချက်များအတွက် 2019 ၏။
သင်တို့သည်လည်းအခြားဝိုင်အမျိုးအစားများကိုအနီရောင်စပျစ်ရည်ကို, ဝိုင်ဖြူ, prosecco သို့မဟုတ်ရှမ်ပိန်ကဲ့သို့သောသုံးနိုင်သည်!
သင်ဘယ်လိုစပျစ်ရည်ကို gummy ဝံအောင်?
လူတွေဟာဒီအရူးအမူးစောင့်ဆိုင်းစာရင်းထဲမှာ ၀ ယ်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာမကြာသေးခင်ကငါဖတ်ဖူးတယ် Rosé gummy ဝံ ။ သူတို့ကအရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီးဂျာမနီကနေတင်သွင်းတာ။ ငါဆိုလိုတာက ... Rose တစ်နေ့လုံးရထားရောက်လာပြီ။ လူတွေအရမ်းလိုတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကိုယ့်တစ် ဦး သို့သင်၏ gummy အရောအနှောကိုငါသွန်းလောင်း gummy ဝက်ဝံမှို ။ အကယ်၍ သင်သည်မျက်လုံးတစ်စက်ကိုအသုံးပြုပါကရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးနိုင်သည်။ ငါကသာ gummy ဝက်ဝံမှိုထက်ပိုကြီးလို့ဒီ gummy bear မှိုကြိုက်ခဲ့သည်။ ဝက်ဝံတစ်ခုစီသည် ၁ လက်မခန့်ရှိသည်။ အစားအစာဘေးကင်းသောဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ နိုင်ပြီ!
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာရှိသောRosé gummy သကြားလုံးများကိုပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောRoséတံဆိပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၅ မိနစ် တစ်ညအေးပါ၂ နာရီ နှစ်ဆယ် မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၁၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ58kcal
Roséဝိုင် Gummy ပါဝင်ပစ္စည်းများ
▢၁၂ oz (၂၈၃.၅ ဆ) ဝိုင် သင်တို့သည်လည်းအနီ, အဖြူ, ဒါမှမဟုတ်ရှမ်ပိန်ကိုသုံးနိုင်သည်
▢၄ အထုပ် (၂၈ ဆ) gelatin (Knox တံဆိပ်)
▢၄ oz (၁၁၃.၄ ဆ) သကြား ဒါမှမဟုတ်ပျားရည်
▢၄ oz (၁၁၃.၄ ဆ) ပြောင်းဖူးရည်
▢1/4 Tsp (၁.၂၃ ဆ) citric အက်ဆစ် မလုပ်မနေရ
ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည့်စွက်မှုအကြားရောနှော, သင်၏ gelatin 1 Tsp အတွက်ဖြန်း။ ဒါကိုအားလုံးထဲထည့်မထားပါနဲ့။ ၅ မိနစ်ခန့်ပွင့်ပါစေ။
gelatin ကိုစက္ကန့် ၃၀ ကြာအောင်အရည်ပျော်ပြီးဇွန်းတစ်ဇွန်းနှင့်မွှေပါ။ ထို့နောက် ၁၅ စက္ကန့်တိုးသည် gelatin သည်ပျော်ဝင်ပြီးစပါးမကျသည်အထိတိုးပွားလာသည်။
အရောအနှောကို ၅ မိနစ်ခန့်ထိုင်ပြီးရေမြှုပ်ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်စေပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ gelatin တစ်ဇွန်းနှင့်အတူ Scoop ။
သေးငယ်သောလျှပ်စစ်ပန်းရောင်တစ်စက်ကိုရေ ၁/၄ Tsp ထဲသို့ထည့်ပြီး gelatin သည်လိမ္မော်ရောင်နှင့်ဆင်တူလျှင် gelatin ရောစပ်ခြင်းကိုထည့်ပါ။
gelatin Rose မှိုသို့သွန်းလောင်း။ ငါနယ်ပယ်မှိုတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့မင်းကပိုနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်သငျသညျ gummy ဝက်ဝံဖှဲ့ကိုအသုံးပွုနိုငျတယျ။
သင်၏ gummies များသည်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ၂ ရက်အကြာတွင်၎င်းတို့သည် gummier texture ရှိကြသည်။
အပြင်ဘက်ရှိအလင်းနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသော၊ နူးညံ့။ စိုစွတ်သော၊ ကြော်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရေနံနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အကြံပေးချက်များတန်ချိန်!
ခြစ်ရာကနေလုပ်အကောင်းဆုံးစိုစွတ်ခြင်းနှင့် fluffy vanilla မယားစကား။ ငါ့သမီးလုပ်တဲ့ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာနဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်။ အလွန်လွယ်ကူ!
တစ် ဦး က Square ကိတ်မုန့် Panel ကိုရန်
နှစ်ထပ်ကိန်းအကန့်ကို fondant ထဲမှာဘယ်လိုတပ်ဆင်ပြီး fondant တစ်ပိုင်းကိုဖုံးအုပ်တဲ့အခါသင်မရနိုင်တဲ့စူပါချွန်ထက်သောအနားများနှင့်ထောင့်များကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။